लि Ac्क अधिग्रहण प्लेबुक | Martech Zone
लि Ac्क अधिग्रहण प्लेबुक
आइतवार, नोभेम्बर 4, 2012 शनिबार, नोभेम्बर ०,, २०२० Douglas Karr
बाहिरी साइटहरूमा लिंकले तपाईंको गुगल रैंकलाई ड्राइभ गर्न सक्दछ भन्ने कुरा केही व्यक्तिहरूले बुझ्ने बित्तिकै एसईओ उद्योगको विकासमा विस्फोट भयो। यो एक अर्ब डलरको बजार थियो र गुगलले चाँडै उत्तम परिणामहरूको साथ प्रयोगकर्ताहरू प्रदान गर्ने नियन्त्रण गुमायो। यो धेरै जसो ब्याकलिks्कहरूको लागि भुक्तानी गर्ने प्रतियोगितामा परिणत भयो। धन्यबाद, योग्य योग्य बजारका लागि, यी एसईओ चियर्स ठूलो मात्रामा रोकिएको छ। गुगल एल्गोरिथ्म परिवर्तनले नराम्रो राखिएको लिंकको मूल्याra्कन गर्‍यो र उनीहरूले पत्ता लगाउने कम्पनीहरूलाई दण्ड दिन सुरु गरे अप्राकृतिक लिंक.
खोज परिणामहरू फेरबदल गर्ने वा हेरफेर गर्ने अभिप्रायले लि Links्कहरू Google को वेबमास्टर दिशानिर्देशनहरूको उल्लंघनमा छन्।
र कसैलाई विश्वास नगर्नुहोस् जसले भन्छ कि तपाईं सामग्री किन्न सक्नुहुन्छ लिंकको साथ र त्यो केहि शर्तहरु को उल्लंघन गर्दैन। यदि खरीद गरिएको सामग्रीको लक्ष्य त्यो लिंक हुनुपर्‍यो भने, तपाईं अझै पनि गुगलका सेवा सर्तहरूको उल्लंघन गर्दै हुनुहुन्छ!
यो इन्फोग्राफिक, रणनीतिक टचडाउनहरू - लि Ac्क अधिग्रहण प्लेबुक, एक महान इन्फोग्राफिक हो जसले चुनौतीहरू, दिशानिर्देशहरू, र प्राकृतिक रूपमा लिंकहरू निर्माण गर्ने अवसरहरूको हिज्जे गर्दछ। यसको उत्तर हो, निश्चित रूपमा लिंकहरू बिर्सनु र अविश्वसनीय सामग्री विकास गर्न तपाईंको प्रयासहरूलाई केन्द्रित गर्नु हो।
उत्कृष्ट सामग्री साझा गरिएको छ। साझेदारी प्रासंगिक नेटवर्कमा गरिन्छ। सान्दर्भिक साझेदारी ड्राइभ प्रासंगिक लिंक। सान्दर्भिक लिंक ड्राइभ रैंक।
टैग: निर्माण लिंकहरूलिंक अधिग्रहणलिंक निर्माणजैविक श्रेणीकरणजैविक खोजमार्केटिंग खोज्नुहोस्एसईओ
Ste चरणहरू यातायात बढाउने र ग्राहकहरूमा सीसा रूपान्तरण गर्ने
राम्रो र नराम्रो लिङ्क निर्माण अभ्यासहरूको बारेमा अनौठो तरिकामा तपाइँको बिन्दु प्राप्त गर्न फुटबल शब्दावलीको ठूलो प्रयोग। Peyton Manning प्रशंसक होइन (न्यु इङ्गल्याण्डबाट भएको) तर म यसको कदर गर्न सक्छु! मलाई विशेष गरी "बल वरिपरि फैलाउने" भन्ने बिन्दु मन पर्छ। तपाईंको दृश्यता सुधार गर्न र स्वाभाविक रूपमा लिङ्कहरू कमाउनको लागि, तपाईंले वेब गुणहरूमा उत्पादन सामग्री आवश्यक छ जुन तपाईंको आफ्नै होइन।
मार्क्स 2, 2016 मा 6: 45 PM
लिंक निर्माणमा उत्कृष्ट विषय। म पक्कै यो विधि प्रयोग गर्नेछु।